Fetiben’ny Blaogy: Tia ny Aterineto ve ianao? · Global Voices teny Malagasy
Hetsika santatra nanoro hevitra mba hanehoantsika ny fitiavantsika ny Aterineto
Nandika (en) i Lyndy Davies
Voadika ny 13 Marsa 2019 5:28 GMT
Andiany tena manokana mihitsy amin'ny tsanganana famoahanay momba ny ‘Fetiben'ny Blaogy’ ity. Saika nanodidina ny fotoana nisehoan'ny Fetin'ny Mpifankatia, ilay andro nentim-paharazantsika ho fankalazana ny fitiavana (sy finamànana), tonga tamin'ny hetsika santatra iray izahay, izay nanoro hevitra anay mba hanehoantsika rehetra ny fitiavantsika ny Aterineto. Fa ahoana no nahatongavan'izany? Ireo mpikarakara ity hetsika santatra ity no tena tsara toerana hanazava azy.
Inona ny ‘Tiako ny Aterineto'?
Fandaharanasa izay natomboka mba hieritreretana mikasika ny toetran'ny aterineto ny ‘Tiako ny Aterineto’, ary mba hahafahana'ireo rehetra mifandray amin'izy io haneho ny fitiavany an'ity tambajotra ity, izay mamela ny mpampiasa azy mba hamorona, mifandray sy miditra amin'ny vaovao amin'ny fomba tsy manam-paharoa teo amin'ny tantaran'ny olombelona.
Ny faha-10 ka htramin'ny 14 Febroary, ho ataontsika izay hampisy tontolo mampihetsi-po indrindra mba hankafizana ireo zavatra rehetra ananantsika noho ny aterineto, amin'ny alalan'ny lahatsoratra am-bilaogy, bitsika, hatsikana, sy lahatsary kely, ary na amin'ny alalan'ny karatra nentimpaharazana nosoratana tànana koa aza.
Fotoana iray fanararaotra koa io mba hahatakarana bebe kokoa ny Aterineto, mba hahafantarana ny fomba fiasany ary hianarana momba ireo fanamby atrehin'izany. Zava-dehibe indrindra ho an'ireo tia ny Aterineto ny fahatakarana ireo loza misy mifandraika amin'ny zo, ny fiainana manokana ary ny fiarovana ety anaty aterineto.
Asainay ianao hanoratra na handrakitra anaty lahatsary ny taratasim-pitiavana iray ho an'ny aterineto, hisaintsaina mikasika ny toetrany ankehitriny, ary indrindra indrindra, hizara ny eritreritrao sy vaovao momba ny fampiasana, toetra sy fiarovana ny aterineto .
Manolo-tena amin'ity hetsika santatra ity izahay, tsy amin'ny maha mpanohana fotsiny, fa ihany koa mba hankaherezana ireo blaogeranay handray anjara sy hanoratra amin'ny alalan'ireo Fetiben'ny Blaogy.
Lohahevitra: Tiako ny Aterineto
Samy tia ny Aterineto avokoa isika rehetra. Fa ahoana no hitenenantsika sy hanehoantsika izany ho an'ity fandaharanasa ity? Araho fotsiny ny fihetseham-ponao!
Manome sehatra ireo blaogera mpandray anjara tsy te-hisehoseho ilay endrika firotsahana atolotray. Afaka manoratra taratasy, andrana, tantara, fijoroana vavolombelona, mamorona haisary na sary, tantara an-tsary, lahatsary ary saika izay zavatra rehetra mety ampidirina ao anaty lahatsoratra am-blaogy ianareo raha toa ka manaja ny fepetra fototra: maneho ny fitiavanao ny Aterineto ianareo.
Raha toa ka vehivavy, na lehilahy ny Aterineto, inona no mety ho tiany ho heno? Mety te-haheno zavatra mahafatifaty bitsihana am-poto-tsofiny ve izy, sa mety te-haheno zavatra azo tsapain-tanana kokoa, toy ny hikarakaranao, hiarovanao sy hitazonanao azy? Sa mety te-haheno ny fikasanao amin'ny hoavy hiarahanareo miaina izy? Satria efa afaka maneho ny fitiavantsika zavatra iray an-tambajotra isika amin'ny fikitihana fotsiny ny bokotra ” Tiako ” , mbola tsy nambaranao tamin'ireo namanao foana ve hoe hatraiza ny fitiavanao ny Aterineto ?
Afaka mandray anjara amin'ity hetsika santatra ity avokoa ny blaogera Amerikàna Latina rehetra, amin'ny famoahana ny lohahevitra atolotra ao amin'ny blaoginy. Tsy maintsy miavaka ilay hafatra, izany hoe famoronan'ilay blaogera, ary tsy nadika avy taminà loharano iray hafa. Avela ho am-pelatanan'ny blaogera ny rafitra, endrika, ary ny halavan'ilay lahatsoratra.
Rehefa namoaka ny lahatsorany ho an'ilay Fetiben'ny Blaogy ilay blaogera, tokony handefa izany any amin'ireto kaonty Twitter manaraka ireto izy, @GVenespanol sy @CyberJuan, ao anatin'izany koa ireto manaraka ireto:
-Ny anaran'ny Mpanoratra
-rohy na URL maharitra misy an'ilay lahatsoratra
Ho fanampin'izany, halefa ao amin'ny pejy Facebook-nay amin'ireo andro voalaza etsy ambony ireo ireo lahatsoratra ireo. Mety haverina ao amin'ny Facebook sy Twitter ambanin'ny tenifototra Twitter #YoAmoInternet sy #GVFest ihany koa izy ireo.
Aorian'ny fe-potoana, hametraka sy hamintina ireo fampidirana ho ao anatina lahatsoratra fanangonana natokana ho an'ny tranonkalan'ny Global Voices amin'ny teny Espaniola izahay. Araka ny isan'ny mpandray anjara, afaka na tsia hilaza ny mpanoratra ireo hafatra izahay, indrindra noho ny antony ara-toerana. Afaka apetraka amin'ireo adiresy Twitter voalaza teo ambony teo ny fanontaniana rehetra.
Mandritra ilay Fetiben'ny Blaogy, hotontosaina ireto hetsika manaraka ireto:
-Vanim-potoana fandraisana anjara. Manomboka ny 9 Febroary ka hatramin'ny 13.
-Famoahana ireo lahatsoratra famintinana ao amin'ny tranonkalan'ny Global Voices amin'ny teny Espaniola. 14 Febroary.
Fanamarihana fanampiny: iangaviana mba tsy hihevitra azy ity ho toy ny fifaninanana tsy misy dikany ; tsy hisy mpandresy sy resy noho izany. Fa kosa, hevero kokoa ho toy ny fitadiavana fandraisana anjara, fiarahamiasa sy fijoroana vavolombelona mikasika ilay lohahevitra natolotra, amin'ny fampiasana fomba iray izay hanome fomba fijery miparitaka, isankarazany, ary manaraka ny vanimpotoana iainana momba ilay lohahevitra, any Amerika Latina sy any Espaina.
Manantena ny fanohanana, fiarahamiasa sy fandraisanareo anjara izahay!
Liana amin'ny fanentanana sy fitaomana ireo blaogera, ary amin'ny fanofanana ireo tranonkalan'ny blaogera ny tranonkalan'ny Global Voices amin'ny teny Espaniola. Nahavita nahatratra izany tanjona izany noho ireo fetiben'ny blaoginy malaza izy. Manampy amin'ny famoronana votoaty miavaka ahitana fomba fisainana sy fanadihadiana somary avo lenta ny tranonkala amin'ny teny Espaniolan'ny Global Voices, raha toa kosa ka mahazo jery mitombo foana amin'ireo asany ary avy amin'ny fitanisana azy ireo ao amin'ny Global Voices ireo blaogera mandray anjara amin'izany.